Sheeko Qosol Badan Marki ay Dowlada hore ay dhaceysay 3 Alifle ayaad eheed hadane Jeneraal ayaad sheeganeeysaa. (Daawo Video-ga Adaa Qosli Doonee.) - iftineducation.com
Sheeko Qosol Badan Marki ay Dowlada hore ay dhaceysay 3 Alifle ayaad eheed hadane Jeneraal ayaad sheeganeeysaa. (Daawo Video-ga Adaa Qosli Doonee.)
iftineducation.com – Waxaa markii ugu horeeysay Barnaamish aad u Qosol badan laga sameeyay Telefishinada qoorta isku galiya bulshada waliba mar kasta wareeysta dad aanan la aqoon oo Qabiil iyo xoog ku soo galay Maslaxa Siyaasada Soomaaliya.
Muuqaalkaan oo Qof kasta ka qosliyay waxaa lagu cabiray qaabka ay Telefishinada u wareeystaan bulshada Soomaaliyeed qeeybaheeda kala duwan gaar ahaan Qabqablayaasha Dagaalka iyo kuwa ka been sheega Darajo aysan laheeyn .
Dhanka Saxaafada ayaa sidoo kale waxaa loo beegsaday si aan qarsooneeyn maxaa yeelay Wariyaasha wax wareeysta ayaa u badan kuwo uu xanaaqooda dhaw yahay waliba inta badan Telefoonada ku damiya qofkii ay is fahmi waayaan ama su´aal kulul weeydiiya .
Halkaan ka Daawo Qosol 3 Alifle Janeraal sheeganaya oo waliba soo indha cad
Arimahaan Haweenka Waligood Ragga Kama Cafiyaan Mana U Sheegaan !!